CHIHUAHUA IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Chihuahua Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Murume Chihuahua, 'Vians Big Mac Attack, yakatumidzwa zita remadunhurirwa Mac- iye akanaka kwazvo mutsvuku uye mutete bhachi mupfupi ane musoro weapuro wakakwana. Akave akaongororwa seakakwana nevatongi vakati wandei. ' Mufananidzo neruremekedzo rweVian Kennels ona zvimwe zveMac pa Chihuahua Mifananidzo Peji 1
Iyo Chihuahua idiki diki chiyero imbwa. Muviri wakareba kupfuura kureba. Musoro wakakomberedzwa, apuro muchimiro uye muromo wakapfupika uye wakanongedzwa nekumira kwakanyatsotsanangurwa. Mbwanana dzine nzvimbo yakapfava pamusoro pehenya iri inonzi 'molera,' iyo inowanzovhara nekukura. Meso makuru, akakomberedza akaiswa mushe mushe uye akasviba, ruby, uye anogona kunge akareruka imbwa chena. Ruvara rwemaziso runosiyana uye kazhinji rwune rima, asi merle geni rinogona kuburitsa imbwa nayo maziso ebhuruu . Nzeve dzakamira dzakakura. Dewclaws anogona kubviswa. Muswe wacho wakareba, wakaita sejeko uye unogona kunge wakapetana kumusana kana kudivi. Iyo jasi inogona kupfupika, yakareba uye wavy kana yakati sandara. Ose mavara, ese akasimba, akaratidzirwa kana akasaswa anotambirwa. Mavara anosanganisira, asi haana kuganhurirwa kune, nhema, chena, chestnut, fawn, jecha, sirivheri, sable, simbi yebhuruu, nhema & tan uye parti-ruvara.
Iyo Chihuahua imbwa yakanaka shamwari. Vakashinga, vane hupenyu hwakanyanya, vanozvikudza uye vanoda, vanofarira rudo. Akashinga, anofara uye anokurumidza, Chihuahuas anogona kuve akasimba-kuda pasina hutungamiriri hwevanhu hwakakodzera. Ivo vakavimbika uye vanonamatira kune varidzi vavo. Vamwe vanofarira kunanzva zviso zvemuridzi wavo. Shamwaridzana navo zvakanaka . Kune vamwe, vanogona kunge vakaomesesa kudzidzisa, asi ivo vakangwara, vanodzidza nekukurumidza, uye vanopindura mushe kune chaiyo, yakasimba asi yakapfava (yakanaka yekusimbisa) kudzidziswa. Zvingadaro zvakaoma kudzimba dzimba . Usarega Chihuahua ichienda nezvinhu zvausingatenderi imbwa hombe kuti iite ( Imbwa Diki Syndrome ), zvakaita se kusvetukira pamusoro pevanhu . Kunyangwe zvingave zvakanaka kune mashanu-pondo imbwa diki yekuisa makumbo ako pagumbo rako paunodzoka kumba kubva kubasa, iri kubvumidza hunhu hwakanyanya. Kana iwe uchirega iyi imbwa diki kuti ive yako pack mutungamiri inozovandudza nyaya dzakawanda dzehunhu dzakadai segodo, hukasha nedzimwe imbwa uye dzimwe nguva nevanhu, uye inozofungira vanhu zvisizvo pasina muridzi wayo. Kana vatorwa varipo, ichatanga kutevera zvese zvinoita muridzi wayo, ichiramba iri padhuze nepazvinogona. Chihuahua uyo ari mutungamiri wepaketi wevanhu vayo anogona kubata vana. Rudzi urwu kazhinji harukurudzirwe vana, kwete nekuti haruna kunaka navo, asi nekuti vanhu vazhinji vanobata maChihuahua zvakasiyana neapo vangaita imbwa hombe, ichikonzera kusavimbika. Nekuda kwehukuru hwayo, rudzi urwu runowanzo kuve rwevacheche uye zvinhu isu vanhu zvatinoona zvakajeka sehunhu hwakaipa hwembwa hombe inotaridzika seyakanaka nembwa diki. Imbwa diki zvakare dzinowanzo kuve akafamba zvishoma , sevanhu vanofunga kuti vanowana maekisesaizi akakwana vanongomhanya vachitenderera mukati mezuva. Zvisinei, kufamba kunopa zvinopfuura kungoekisesaiza. Inopa kukurudzira kwepfungwa uye inogutsa hunhu hwekutama hune imbwa dzese. Nekuda kweizvi, mhando diki dzakadai seChihuahua dzinowanzoita kunge dzinotsvedza, yappy, inodzivirira uye isingavimbike nevana nevanhu vavasingazive. Chihuahuas ayo ari avo epaketi mutungamiri wevanhu anowanzo kuve akaenzana imbwa-ine hukasha. Iye muridzi anoona izvi uye anobata maChihuahua kwete zvakasiyana neapo vaizoita rudzi rukuru, achiva akajeka mutungamiriri wepakeji, anowana imwe, inonakidza hunhu kubva kune iyi imbwa diki inoshamisa, achiiwana iri yakanaka mwana mudiki shamwari.
Kureba: 6 - 9 inches (15 - 23 cm)
Kurema: 2 - 6 mapaundi (1-3 kg)
Yakajairwa rheumatism, yakatsvedza stifle, dzihwa uye chingamu matambudziko. Zvakare kuoma kwekorona uye yechipiri glaucoma, nekuda kwemeso avo anobuda. Kuwedzera uremu zviri nyore. Chenjerera kutenderedza zvigadzirwa zvine chepfu senge chokoreti kana fetiraiza. Urwu rudzi rudiki kwazvo uye harutore zvakawanda kuvapa chepfu. Chihuahuas anowanzozvarwa kuburikidza nechikamu chekusiya nekuti mbwanana dzinozvarwa dziine misoro yakati kurei. Inobatwa nekutsemuka uye dzimwe tsaona muhuhwana. Mamwe maChihuahuas ane molera, chikamu chisina kuvharwa chedehenya chinogona kuramba chakashama muhupenyu hwese. Izvi zvinoita kuti imbwa ijaire kukuvara. Ane hunyanzvi hwekukanya uye kuridza ngonono nekuda kwavo zvidiki, zvipfupi. Inowanzoita kushushikana, inokonzerwa nevatenzi maitiro ekuvabata sevacheche vadiki. Imbwa dzese, kunyangwe idiki, dzinofanirwa kunzwa kuti varidzi vadzo vane pfungwa-dzakasimba zvisikwa vanokwanisa kubata iro rese rongedza.
Chirwere chinoratidzika kunge chiri kuwedzera pakati peChihuahuas iGME, inomirira Granulomatous Meningoencephalitis. Iri kuramba ichiwanda pakati pemusoro weapuro Chis. Iko, panguva ino, isina kunyatsonzwisiswa yepakati system system chirwere iyo inongoerekana yarova pasina yakawanda yambiro. Iyo inouya mumhando nhatu: focal (maronda ari muuropi kana musana) multifocal (maronda mukati mehuropi uye musana pamwe nemeso) uye maziso (zvichikonzera upofu. Kune nzira dzinoverengeka dzazvino dzekurapa izvozvi uye izvo zvinoramba zvichivandudzwa se kutsvagurudza kwakawanda kunoitwa.Nepo paine nzira dzekudzora idzo imbwa dzinorarama kwemavhiki maviri ekutanga, zvinosuwisa, hapana mushonga wechokwadi.Inogona kupinda mukuregererwa, dzimwe nguva kwemakore, asi inogona kumuka nguva dzose.Mishonga, kuyedzwa, nezvimwewo pakutanga kuitira kuti uongorore zvakanaka, mutengo uri muzviuru uye zvakawanda, zviuru zvakawanda zvichada kushandiswa mumakore akasara ehupenyu hwembwa.Nepo GME ichiitika mune mamwe marudzi mazhinji (kazhinji matoyi emhando kunyangwe paine vamwe, pane huwandu hwakawanda hweChihuahuas nahwo. Sezvineiwo, deer musoro Chihuahua's haawanzo kuve nyore kutarisana neGME, chete iyo apple-musoro mhando.
Idzo imbwa diki dzakanaka dzehupenyu hwemafurati. Iyo Chihuahua inoda inodziya mamiriro ekunze uye haifarire kutonhora. Vanoda nzvimbo senge chero imwe imbwa. Nekuti zvidiki hazvireve kuti dzinogona kuchengetwa munzvimbo diki kwazvo.
Kunyangwe iri kuyedza kutakura zvisikwa izvi zvinonaka nezve, idzi imbwa diki dzinoshanda dzinoda a kufamba kwezuva nezuva . Kutamba kunogona kutarisira yakawanda yavo yekurovedza inoda, zvisinei, sekune ese marudzi, mutambo hauzadzise hunhu hwavo hwepamoyo hwekufamba. Imbwa dzisingaende kuenda kunofamba zuva nezuva dzinogona kuratidza huwandu hwakawanda hwe matambudziko ehunhu , pamwe nenyaya dze neurotic. Vachafarirawo romp yakanaka munzvimbo yakachengeteka yakavhurika kubva pamutobvu, senge hombe, yakavakirirwa-muyadhi.
Anenge makore gumi nemashanu kana anopfuura.
Inenge 1 kusvika ku3 vana
Jasi rakatsetseka, rakapfupika rinofanirwa kukweshwa zvinyoro nyoro dzimwe nguva kana kungopukutwa nejira nyoro. Iyo refu jasi inofanirwa kukweshwa zuva nezuva neine bristle bhurasho. Shambidza mhando mbiri idzi kamwechete pamwedzi, uchichenjerera kuti usawane mvura munzeve. Tarisa nzeve nguva dzose uye chengetedza zvipikiri zvakagurwa. Rudzi urwu ivhareji yekurasa.
Urwu ndirwo rudzi rwekare pane kondinendi yeAmerica uye rudzi diki kwazvo munyika. Native kuMexico, kwayakagamuchira zita rayo kubva kuMexico State yeChihuahua. Izvo zvakangounzwa kuEurope pakupera kwezana regumi nemapfumbamwe century. Mhando dzakashandiswa kugadzira Chihuahua hadzina kujeka, asi vamwe vanofunga kuti dzakabva kuna Fennec Fox. Idzo imbwa dzaive dzinoyera kune Pre-Columbian maIndia nyika uye dzaivewo dzinozivikanwa dzinovaraidza kune vepamusoro kirasi. Idzo imbwa dzinokosheswa nehukuru hwadzo uye dzinonyanya kukosheswa kune vamwe vafudzi kana dzichirema zviri pasi pe 2-1 / 4 pondo (1.3 kg).
Maodzanyemba, AKC Toy
ANKC = YekuAustralia National Kennel Kirabhu
'Tine Stoli (kurudyi) makore matatu apfuura patakange tiri kukoreji kumashure kumabvazuva kuUNC. Mufananidzo wekutanga ndiye pavhiki dze7. Iye mupfupi-jasi fawn ine nhema sable. Sezvo iye zvaaikura sable nhema yakasvava uye iye anenge akatsemuka zvachose kunze kwemutsara mutema pane muswe wake. Takatofanira kushanda nesimba kuti timutorere kuwana ' imbwa diki chirwere , 'izvo zvinoita kuti mhando zhinji dzekutambisa dzive yappy uye isingadiwe nevasingazive. Akabatana neshamwari zhinji uye nhengo dzemhuri uye ini ndakamuendesa kukirasi neni uye mubhazi. Ndakatotora kutora kwake mwana neni uye iye zvino ANODA vana zvinova zvisiri zvinozivikanwa hunhu mune imbwa diki. Nekuda kwekushanda kwedu nesimba ku mubate sembwa uye kwete chidiki chidiki chakashata chaari chaizvo kuzvibata zvakanaka uye kwete kuvhundutswa nevanhu nenzvimbo nyowani. Iye anozivawo anopfuura gumi nemashanu manomano uye anoda kuita! Stoli ane 3.8 mapaundi uye angangoita matatu makore. Kwangodarika mwedzi wapfuura takafunga kuti titore wekutamba naye Stoli yaive saizi yake. Uyu mufananidzo wekutanga Roxi pamasvondo masere uye gumi nemashanu maiza. Iye ane chihurehua chihuahua uye anofanirwa kukwira kusvika pamasendi matatu kusvika ku3,5 semunhu mukuru. Vhudzi rake rizere harizokura kudzamara ave nemakore 1 1/2 ekuberekwa, uye parizvino achapfuura nemu'mbwanana dzakaipa 'inova nhanho yevechiri kuyaruka yemhando refu-yakaputirwa pakati pembwanana yavo nejasi revakuru. Muvara wake wakasviba mutema uye wakasviba nechena chena kora uye chena tsoka. Iye zvakare ane merle mamaki ayo anopa iyo yakaonekwa bhuruu uye nhema pateni kune jasi rake. Iyo merle geni inoburitsa kunze kweruvara zvakanyanya kubva kune yakasviba chikamu chejasi rake ichisiya grey / bhuruu nzvimbo. Izvo zvakabatawo ziso rake remaziso, iro rakapomberedzwa nebhuruu uye shava. Merle Chihuahua inorambidzwa kubva kune mamwe masangano kutenderera pasirese, asi iyo AKC ichiri kubvumidza iyo mune yekuratidzira mhete. Icho chikonzero cheichi chinogona kuve kunetsekana kwehutano kwakabatana negene. Asi isu tinoda Roxi mudiki kusvika kurufu uye ane hutano zvakakwana uye anokura nekukurumidza! Kufamba-famba mutown nevaviri ava tinomira tichigara tichibvunzwa kuti imbwa dzakaita sei uye kutiudza kuti vakanaka sei. Munguva pfupi yadarika tanga tichinzwa vana vachideedzera kuti 'Amai tarisai vanobva kuBeverly Hills!' nekuda kweiyo firimu idzva reDisney. '
'Ava ndivo vana vedu veChi, kubva kuruboshwe: Maxwell (mwedzi mitanhatu), Milo (mwedzi mipfumbamwe) naMatilda (zvakare mwedzi mipfumbamwe). Ipo Milo naMatilda vari padivi rakakura reChi chiyero pa7 ne9 lbs., Maxwell ari pahukuru hwepakati pamwero ungangoita 4½ lbs. Milo iri yakati wandei padivi rehusimbe uchienzaniswa nemamwe maviri uye dzimwe nguva anongogara akatarisa vamwe vachitamba. Iye zvakare haana kuchengeteka izvo zvatiri kushanda pamwe naye. Ivo vese vane rudo zvakanyanya zvisinei uye vanogara vachishushikana kugovana kutsvoda neavo vanhu uye mumwe nomumwe zvakafanana. Dzimwe nguva vanovata muzuva vachigezesana kumeso uye nekuva nechokwadi chekuti vese vari kutaridzika zvakanaka. Ipapo vanobva vakomba mumagumbeze, mapiro, nezvimwewo kusvikira vazviburitsa zvakakwana kuti vagadzikane uye voenderera mberi nekurara kwenguva refu. Kunyange pasina chimwe chazvo chiri icho ' alpha '(ndiro basa revanhu, handizvo here?!) mukadzi wedu, Matilda ndiye anonyanya kuve mukuru kunze kweboka. Kana iye achida kutamba, zvirinani utambe kana zvikasadaro iwe unowana 'dhongi kurova' kudzamara awana mhinduro. Chaiye mukadzi! (uye hongu, ndinogona kutaura izvozvo nekuti NDIRI mukadzi!: o)
'Ini ndaigara ndiri imbwa hombe munhu uye chaiye ndaisambofarira imbwa diki . Nekudaro, pandakanga ndichida kuwedzera kutsva kumba kwedu, ndakaita kutsvagisa kwekubereka ndikawana maChihuahua kuti anyatsoenderana nezvandinoda imbwa. Sezviri pachena ivo vakapfuura zvandaitarisira sezvatakabva kune imwe kuenda kumatatu eChihuahua mumwedzi mitatu mipfupi pasina kana kuzvidemba.
'Ndanga ndichitarisa zvinoratidzwa naCesar Millan kwemwedzi yakati wandei izvozvi uye ndatanga kushandisa akawanda maitiro ake. Nepo mbwanana dzangu dzichiri diki uye riri basa riri kuenderera mberi sezviri kuita vazhinji, ndinofunga kushandisa nzira idzi kuchavabatsira kuti vave vanhu vakuru vakaenzana. Ehezve, pandinoona zvakanyanya, ndipo pandinonyanya kudzidza saka neniwo ndiri ' pack mutungamiri shanda uchienderera mberi. ' Vana vangu vatove nekufunga kukuru semhedzisiro uye semuenzaniso weizvozvo sezvauri kuona vari nyore 'pose-vanokwanisa' kumifananidzo. : o) '
'Jasper ane 9-vhiki-bhuru bhuruu merle Chihuahua anorema 1.4lbs. Anotyisa, asi mukomana akanaka chose. '
Monkey chiChihuahua ane vhiki gumi. Akatumidzwa zita rake kuti Tsoko nekuti anokwira pamapfudzi angu nguva dzese uye anofarira mabhanana, saka ndakafunga kuti 'Tsoko' inomukwanira. Iye ari, anotamba kwazvo uye mufaro kuve nawo. Iye zvakakwana pad yakadzidziswa ikozvino uye anoziva gara ! Anogara nevanhu vakuru vaviri, vaviri vachiri kuyaruka (15 ne16) uye vana vadiki vaviri (7 ne11) uye anoda munhu wese. Asi, yakanamatira kwandiri (ndine makore 16). Tsoko inofungidzirwa kuyera anenge matatu lbs. vakura zvakakwana. Iye akangwara zvakanyanya uye ane hunhu hukuru, zvinoshamisa. Tsoko ndeyechokwadi a lapdog uye kunditevera kwese kwese !! Anoda kutasva mota uye ari chaizvo kushamwaridzana zvakanaka . Ndatarisa Cesar Millan kweanenge makore matatu ikozvino uye ndaverenga bhuku rake. Anoshamisa uye akandidzidzisa zvakawanda nezve imbwa psychology, iye zvechokwadi chidhori changu. Tsoko imbwa yakanyatsogadzikana uye ini ndakamudzidzisa iye mudiki kuti arege kuva nepfungwa dzakatarwa famba pese pandiri kana kuyedza kundidzora neimwe nzira. Kunyangwe aparara akaora, iye anoziva ndiani boss . Ini ndaisakwanisa kufungidzira hupenyu hwangu ndisina wangu Tsoko uye ndine makore mazhinji ekutarisira mberi. NDICHAVA chete naChihuahuas ivo rudzi runoshamisa uye mufaro wechokwadi kuva nawo! '
'Uyu mwana wedu wemwedzi 8, 4.5-lb. Chihuahua Tequila. Tinomuti Tiqi sezita remadunhurirwa uye tinomuda kusvika pakufa. Iye ane simba kwazvo uye ndinofara kuona yako saiti zvinyorwa izvo zvavanofanirwa kuve kufamba zuva nezuva . Vanhu vazhinji vanofunga kuti nekuti mudiki kwazvo, haadi, asi maitiro ake ari nani kwazvo kana achinge aekisherwa. Iye ane hushamwari kwazvo uye anotenda kuti chero munhu waanoona aripo kuti abatsirwe nekumubata. Haana kumbodzidza kuhukura, izvo zvakatinakira. Anoita zvakanaka nedzimwe imbwa nevana uye akangwara kwazvo! Isu takakwanisa kumudzidzisa kugara, kuzunza neyese yekurudyi neyekuruboshwe makumbo, uye 'kufamba akanaka' muvhiki rimwe! Uyu ndiye ave kugadzirira kunorara muPJ yake. '
bernese mugomo german mufudzi musanganiswa
Uyu ndiBoo, akapfupika ese-matema Chihuahua pazera rimwe chete, anorema mapaundi matanhatu. Dema rakasimba harisi iro rakajairika ruvara muChihuahua rudzi.
Chokoreti yemavara akura Chihuahua
Chokoreti yakavaraidza Chihuahua puppy
'Blondie, wedu Chihuahua ane makore mapfumbamwe ekuberekwa uye anga akatasva nesu kwemashanu emakore iwayo. Blondie akatasva anopfuura mamaira chiuru. Tinoenda naye parwendo rurefu. Kana tikamira kuti tidye iye ane bhegi anogara akanyarara mukati medu tichidya (zvirokwazvo chikafu chinokwirwa muhombodo yake). Ndiye imbwa inoshamisa kupfuura dzose dzandakambova nadzo. Anoda kuva nesu kwese kwatinoenda. Ndinogadzira hombodo dzehombodo uye zvipfeko zveganda kune imbwa. Ndinovatengesa pamisangano yemidhudhudhu uye iye muenzaniso wakanaka. Mufananidzo wandiri kutumira wakatorwa nasahwira wedu isu tanga tiri munzira yekukwira iyo Bonnie naClyde kukwira muLouisiana. Imbwa yangu imbwa yakaenzana. Muchokwadi, isu tinotarisa Cesar nguva dzose. Pane chimwe chezvikamu zvake aive achibatsira vaviri muCalifornia kutora imbwa yavo, Jack Russell, kuchovha. Mukutanga kwechiitiko ichocho imbwa iri kupfeka imwe yemapfekero angu akatengwa paBay. Nenzira, ndiri mugadziri wembwa saka anotanga kuenda kunoshanda neni mazuva ese. '
Ona mimwe mienzaniso yeChihuahua
Chihuahua Mifananidzo 1
Chihuahua Mifananidzo 2
Chihuahua Mifananidzo 3
Chihuahua Mifananidzo 4
Chihuahua Mifananidzo 5
Chihuahua Mifananidzo 6
Chihuahua Mifananidzo 7
Chihuahua Mifananidzo 8
Chihuahua Imbwa: Unganidzo Inotorwa Vhidhiro
goridhe retriever uye poodle muchinjikwa
daschund uye cocker spaniel musanganiswa
goridhe retriever uye yorkie musanganiswa
cocker spaniel yakasanganiswa ne terrier
imbwa ichiita kubhenda kumashure
chii imbwa inonyengera